Vitasoa : dikisionera frantsay-malagasy vaovao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lafo raha henoina fotsiny amin’izao ny vidy ahafahana manjifa ity boky vaovao Vitasoa ity. Vidy izay antonony kosa raha jerena amin’ny fahalalana voarakitra ao anatiny. Mora aza raha ampitahaina amin’ny boky vaventy iray sokajy aminy. Lafo hatrany anefa raha mitaha amin’ny fahefa-mividin’ny ankamaroan’ny Malagasy. Raha ny tantarany, niara-niasa tamin’ny zezoita ireo mpampianatra mpikaroka. Nisy fanampiana vola. Fikaonan-doha an-taona maro sy nandaniana mondrin-kery no nahavitana azy. Anisan’ny voka-pikarohan’ny manam-pahaizana malagasy goavana i Vitasoa. Boky be misongadina eo amin’ny tontolon’ny asa fikarohana, indrindra ho an’ny eo anivon’ny fakioliten’ny teny aman-tsoratra sy ny siantsan’ny maha olona. Ny edisiona Ambozontany no namoaka azy. Fanadihadiana.
Lahatsoratra : Rabarisona sy Ravonjiniaina
Mahay teny malagasy sy teny frantsay amin’i Vitasoa
“Isaky ny sekoly no mba nofinofiko hahitana ity rakibolana Vitasoa ity”, hoy i mompera Guillaume Rakotonandratoniarivo. Pretra zezoita izy. Tale nitantana ny edisiona Ambozontany Analamahitsy: 2000-2013. Ary isan’ny nitondra anjara biriky tamin’ny nahatontosana an’i Vitasoa. Nohariny amin’ny zaza vao teraka izy ity. Tamin’ny fanolorana ny rakibolana moa no nilazany izany teny izany, nandritra ny fotoana niaraha-nifaly teny amin’ny edisiona Ambozontany, tao Analamahitsy Antananarivo, tamin’ny zomà 7 aogositra teo. Zava-dehibe ny fampielezana sy fahazoan’ny mpianatra ity rakibolana vaovao ity, raha io fanirian’i mompera io no dinihina. Ho zary sakaiza akaikin’izy ireo eo amin’ny fianarana ataony amin’izay ity boky goavana ity. Resy lahatra izy fa fitaovana lehibe azo enti-miasa i Vitasoa. Eo aloha ny fianarana sy fandalinana ny teny frantsay. Fa eo koa ny fanarenana ny tsy mety sy fanomezan-danja ny teny malagasy, izay mampanano sarotra ny maro eo ny fanoratana sy fifehezana azy. Miharihary rahateo ankehitriny ny tsy fahafehezan’ny ankamaroan’ny zanaka malagasy ny teny malagasy. Mazava ao anatin’ity rakibolana Vitasoa ity ny fitsipi-panoratana. Voavaly ao ireo mampisalasala ny tsy mahay manoratra teny malagasy. Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao, azo raisina ho boky fizaha ity rakibolana ity, na “référence”, araka ny fitenin’ny manam-pahaizana azy. Ary ampirisihana rahateo ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny olon-drehetra mba hampiasa rakibolana, rahefa misy ny tsy azoazo. Na koa ilam-panamafisana eo amin’ny fahamarinan’ny teny, na ny fanoratana azy na ny heviny.